मानव मस्तिष्कको बारेमा केहि रोचक तथ्य - ज्ञानविज्ञान
३. अक्सिजन बिना ५ मिनेटमा मस्तिष्कको क्षति हुन सक्छ। ।
१२. मानब मस्तिष्कमा एक सेकेण्डमा 100,000 भन्दा बढि रसायन प्रतिक्रियाहरू हुन्छन्।
समय भएमा यो पनि पदनुहोस |
१) प्राय बिज्ञापनको लागी प्रयोग गरिएको घडीको तस्बिर हेर्नुस्, १० बजेर १० मिनट गएको समय देखाईएको हुन्छ । कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको थियो ? भर्खर गूगलमा सर्च गरेर घडीको बिज्ञापन हरु हेर्नुस ।
२) तपाईंको बेडरुम मा जम्मा हुने धुलोको मुख्य श्रोत भनेको तपाईंको आफ्नै शरिरको मृत कोशीका र छालाका कण हरु हुन ।
३) प्रत्यक १ मिनट मा करिब १०० घण्टा बराबरका भिडियो हरु युट्युबमा अपलोड हुने गर्छन ।
४) लिपस्टिक बनाउनको लागी माछाको कत्ला प्रयोग गरिन्छ ।
५) मान्छे सुतेपछी निदाउँनको लागी लाग्ने औसत समय भनेको ७ मिनट हो ।
६) डल्फिन निदाँउदा समेत आधा मष्तिस्क सन्चालन मै हुन्छ । यसकारण डल्फिन डुब्न बाट जोगिन्छ ।
७) गाईले मिथेन ग्यास उत्पादन गर्ने गर्छ , जुन बायु प्रदुषणको एक मुख्य कारण हो ।
८) Cockroach अर्थात् सांग्ला त्यस्तो जीव हो जुन, बिना टाउको पनि कैयौ हप्ता बाच्न सक्छ ।
९) हिप्पोको पसिना रातो हुन्छ ।
१०) बुध ग्रहमा हुने १ दिन बराबर पृथ्वीमा ५९ दिन हुन्छ ।
११) शार्कको जीवनकालमा करिब ३०,००० दांत झरेर जान्छ ।
१२) संखे किरा जो लगातार ३ बर्ष सम्म निदाउन सक्छ ।
१३) स्याउ , आरु , बदाम , स्ट्रबेरी , चेरी , यि सबै फलफुलहरु गुलाब बर्ग मा पर्दछन । अचम्म छ होईन ?
१४) पानी बिना उँट जती बाँच्न सक्छ, त्यो भन्दा बढी जिराफ बाँच्न सक्दछ ।
१५) तपाईंले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन कुन्नी , बिश्व प्रख्यात कला “मोनलिसा” को चित्रमा परेली अर्थात् आँखिभौं नै छैन ।
१६) छेपारोले एकैपटक मा आफ्नो दुई आँखले दुई फरक दिशा तर्फ हेर्न सक्छ ।
१७) अक्टोपसको ३ वटा मुटु, ९ वटा दिमाख र निलो रगत हुन्छ । हजुर, एकदम सही पढ्नु भयो हजुरले । – ३ वटा मुटु, ९ वटा दिमाख र निलो रगत ।
१८) संसारको सबैभन्दा ठुलो रोजगार दाता अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय हो , जहाँ ३० लाख जना रोजगार छन् ।
१९) सलाई को आविस्कार हुनु भन्दा १० बर्ष अगाडिनै लाईटर को आविस्कार भैसकेको थियो ।
२०) मह मात्र एक त्यस्तो खाना हो , जो सयौ बर्ष सम्म पनि सड्दैन ।
Don't Miss it मुख तथा सास गनाउने समस्या र यसको समाधान
Up Next खलासीको काम गर्दा गर्दै रजनीकान्त सुपरस्टार बने भने प्रयाश गर्ने हो भने, म चाँही कसो केही बन्न नसकुला र ?